होली भन्दा पहिले फेस र कपालको ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु – newslinesnepal
होली भन्दा पहिले फेस र कपालको ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०५:४५
होली, अर्थात रंगहरुको उत्सव । यसको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक महत्व छ । खासमा होलीलाई रंगहरुको पर्व भनिन्छ । विभिन्न रंगले एकअर्कालाई रङ्याएर यो पर्व मनाइन्छ । यो उत्सव हामी त्यहीबेला मनाउँछौं, जतिबेला प्रकृतिमा हरियाली छाउँछ । बोट विरुवामा नयाँ पालुवा पलाउन थाल्छ । फूलहरु हावामा बयेली खेल्न थाल्छन् । हो, यतिबेला प्रकृति रंगीन हुन्छ । अतः प्रकृतिसँग एकाकार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश होली पर्वले बोकेको छ । रंगीन प्रकृतिको पृष्ठभूमीमा हामीले पनि सप्तरंगी जीवन बिताउनुपर्छ । रंगको स्रोत के होला ?
सूर्यको किरण नै रंगको मूल स्रोत भएको वैज्ञानिक तथ्य छ । सूर्यको ज्योतिमा विभिन्न सात रंग प्रकट हुन्छन्- वैजनी, आकासे, निलो, हरियो, पहेंलो, रातो र सुन्तले । त्यसो त सूर्यको किरणमा सात रंग हुन्छन् भन्ने कुरा विज्ञानले होइन ऋषि-मुनीहरुले पनि परापूर्वकालदेखि मान्दै आएका छन् । सूर्यको यही सप्तरंगी किरणको शक्तिलाई बुझेर नै उनीहरुले सूर्य चिकित्सापद्धति विकास गरेका थिए । जीवन श्यामश्वेत हुनुहुँदैन, प्रकृति जस्तै रंगीन हुनुपर्छ भन्ने अर्थ पनि छ । यस हिसाबले होलीको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ । तर, यसलाई बुझेर मनाउनुपर्छ ।
होली आफन्त, साथीभाइमाझ खेल्ने हो । नचिनेका व्यक्तिलाई लोला छ्याप्नु आफैमा मुर्खता हो, अपराध हो । प्रकृतिसँग एकाकार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश होली पर्वले बोकेको छ । रंगीन प्रकृतिको पृष्ठभूमीमा हामीले पनि सप्तरंगी जीवन बिताउनुपर्छ । हामीकहाँ के चलन छ भने, अरुलाई लोला छ्यापेर आफू रमाउने । अरुलाई पिचकारीले भिजाएर आफू हाँस्ने । यो विकृति हो । होलीको महत्व र अर्थ नजानेकाहरुले गर्ने कृत्य हुन् यी । वास्तवमा होली रंगहरुले खेल्नुपर्छ । रंग पनि प्राकृतिक हुनुपर्छ । यस्ता रंगले शरीरलाई नराम्रो असर गर्ने होइन, बरु राम्रो गर्छ । बजारमा पाइने कतिपय रंगहरुमा रसायन मिसाइएको हुन्छ जसले शरीरमा क्यान्सरसमेत गराउँछ । त्यसैले होली खेल्न प्राकृतिक रंगको व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ ।
४. धनियाँ र पुदिनाको पेस्टलाई पानीमा मिसाएर पनि रंग वनाउन सकिन्छ । साथै अबिरले पनि होली खेलिन्छ । सिसा नमिसाइएको गुणस्तरीय अबिरले स्वास्थ्यमा खास हानी गर्दैन । सुख्खा अबिर शरीरबाट सजिलै हटाउन पनि सकिन्छ । अतः यहाँ होली खेल्नेबारे केही जानकारी दिइएको छ । होलीका लागि आवश्यक सामग्री के होला त ? यसका लागि सकेसम्म प्राकृतिक रंगको व्यवस्था गरौं, फूल, पात आदिको रसबाट । चन्दन, बेसार आदिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खेल्नुअघि सफा पानीको व्यवस्था गरौं । रंगको असरबाट छालालाई जोगाउनका लागि आवश्यक क्रिम जोहो गरौं । केसमा लगाउने क्रिम एवं तेल, होली खेलिसकेपछि रंग हटाउन प्रयोग गरिने केमिकल, साबुन आदिको व्यवस्था गरौं ।
२. गिलो रंगलाई तुरुन्तै पुछिदिने हो भने पनि रंग जान्छ । ३. टाउकोमा लागेको अविरलाई काइँयोले कोरिसकेपछि स्याम्पु प्रयोग गरेर नुहाउनुपर्छ ।
४. साबुन दलेर नुहाउँदा पनि अविर हटाउन सकिन्छ । ५. कसैले अविर दल्नासाथ झट्कारेर पनि हटाउन सकिन्छ । होलीको रंगमा प्रयोग हुने रसायनले क्यान्सरसमेत हुनसक्छ । त्यसैले सकेसम्म प्राकृतिक रंग प्रयोग गरौं । चन्दन, बेसार, फूल, पातको रस उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।
१. बेसनमा कागती र दूध मिसाएर पेस्ट बनाउने, त्यसलाई छालामा लगाएर १०-१५ मिनेट त्यत्तिकै छाड्ने र धुने ।
– होलीमा खेलिने रंगले कपाललाई सुख्खा पार्न र हानि गर्न सक्छ। त्यसैले हजुरले कपाललाई बाट्नुहोस्। यसले कपाल राम्रो देख्नुको साथै रंगहरुबाट पनि बच्ने सजिलो उपाय हो।
– यदि हजुरको कपाल सानो छ भने रुमालले बाध्न सक्नु हुन्छ।
– हजुरले आफ्नो छालामा प्रयोग गर्ने तेलमा थोरै कागतीको रस मिसाएर कपालमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कपाललाई चाँयाबाट बचाउछ। तेल र कागतीको रसको बराबर मात्रा लिनुहोस् र कपालमा लगाउनुहोस्। यसले रंगलाई scalp मा धेरै समयसम्म रहन दिदैँन।
– नरिवलको तेल – १ चम्चा
– जैतुनको तेल – १ चम्चा
– Castor तेल – १ चम्चा
तीनवटा तेलको मिश्रण तयार गर्नुहोस् र होली खेल्नु अघि आफ्नो छालामा लगाउनुहोस्। कान र शरीरको अन्य भागहरुमा पनि लगाउनुहोस्। Sunscreen को प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् र सकभर make-up को प्रयोग नगर्नुहोस्।
कपाल: – सबैभन्दा पहिला रंगहरु निकाल्नको लागि मनतातो पानीले कपाल पखाल्नुहोस्। हजुरले हर्बल shampoo को प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। कपाल धुनु अघि गहिरो conditioner मास्कको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
मास्क बनाउने तरिका:
– १ चम्चा नरिवलको तेल, मह र दहिमा आधा चम्चा जैतुनको तेल मिसाउनुहोस्।
– तयार मिश्रणलाई कपालमा लगाएर एक घण्टा छोड्नु होस् र पखाल्नुहोस्। यो मास्कको प्रयोगले हजुरको कपालको रंग निकाली कपाललाई नरम र चम्किलो बनाउंछ।
होली खेलीसके पछि सिधै साबुनको प्रयोग गर्नु हुँदैन। रङमा भएको हानिकारक रसायनहरुले छालामा असर गर्न सक्छ र त्यस माथि साबुन प्रयोग गरेमा छाला झन बिग्रिने र दाग पोतो आउने जस्ता छाला सम्बन्धी रोगहरुको सम्भावना बड्छ।
– हजुरले बदाम अथवा नरिवलको तेलले आफ्नो छालामा मसाज गर्न सक्नु हुन्छ।
– भिजेको कपास लिनु होस् र रंगहरु पुछ्नु होस्।
– रंगहरु हटे पछि मन तातो पानीले नुहाउनुहोस् र moisturizer को प्रयोग गर्नुहोस्।
– यदी हजुरको छाला सुख्खा र चिलाउन थालेको छ भने नुहाउनु अघि थोरै घिउ कुमारी (aloevera) को gel ले मसाज गर्नुहोस्।